Luka Modric: “Saddex Toddobaad Kadib Waan Ciyaari Doonaa”
HomeWararka MaantaLuka Modric: “Saddex Toddobaad Kadib Waan Ciyaari Doonaa”
Modric oo Jidka Ku soo Jira iyo Pepe oo soo laabtay
SAWIRKA MAALINTII UU DHAAWACMAY
Xiddiga khadka dhexe ee Real Madrid, Luka Modric ayaa sheegay in uu muddo saddex todobaad kadib ah uu garoomada dib ugu soo laaban doono isla markaana uu ka bogsan doono dhaawacii uu muddada badan u jiifay.
Modric oo u warramay wargeyska Maalinlaha ah ee dalka Croatia ee Sportske Novosti ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in uu sidii qorshuhu ahaa u dhamaysto muddada uu kaga bogsanayo dhaawaca isla markaana aanu degdeg gelinin caafimaadkiisa, si aanay mushkilad kale ugu dhicin.
“Waan ogahay in dhaawaca noocan oo kale haddii aad isa-soo qaddinto in aad khatar is gelinayso. Waxa muhiim ah in marka aad garoomada ku soo noqonayso aad sidaadii hore u ciyaari karaysid, boqolkiiba boqolna si degdeg ah Ayaan u soo laaban doonaa” sidaa waxa yidhi Modric oo u warramayay wargeyska maalinlaha ah ee Sportske Novosti ee laga leeyahay wadanka uu ciyaartoygu ka soo jeedo ee Croatia.
Modric waxa uu beeniyey in uu kala duwanaansho fikir soo kala dhex galay dhakhaatiirta Real Madrid, waxaanu tibaaxay in uu ku faraxsan yahay qaabka ay ugu shaqeeyaan ee ay u daryeelaan caafimaadkiisa. “Daaweyntii la isiiyey aad ayaan ugu faraxsanahay. Belgium ayaan soo kabashadaydii daawooyinka ku qaatay magaalada Vitoria, baadhitaannadii iyo tijaabooyinkiina Munich heshiis ayaana lagu wada ahaa qof kasta iyadoo ay kormeer samaynayeen kooxda dhakhaatiirta ee naadigu. Dhaawaca oo adkaa dartii markii aanu la tashanay khubarada waxa ay heshiis ku noqdaan in daawooyinka iyo wakhtiga bogsashadu ay muhiim tahay in la ilaaliyo, sababtoo ah maskaxdaydiina way nasatay waxaanan ku kalsoonahay sida ay iigu shaqaynayaan” ayuu raaciyey.
Modric waxa uu dhaawacmay November 8 isagoo ku jiray ciyaar dhex maraysay xulkiisa Croatia iyo waddanka Italy oo ka tirsanayd is-reeb-reebka koobka Euro 2016, waxaanu garoomada ka maqan yahay muddo saddex bilood ah.
Xidhiidhka kubadda cagta ee Croatia FA ayaa warbixin ay dhakhaatiirtiisu warbaahinta ku shaaciyeen waxa ay ku sheegeen in Modric uu hadda ordi karayo isla markaana uu saddex todobaad ka bacdi tababarka la bilaabo doono kooxdiisa.
Waxa uu hadda dareemayaa xanuun yar oo dib u dhigaya in uu ciyaaraha ku soo laabtay sababtoo ah muruqa uu dhaawacu ka gaadhay ayaan wali sidiisii ku soo noqonin.
Warkan ayaa farxad u ah Real Madrid, waxaana haddii sidaa la sheegayo ay hawluhu u socdaan uu Modric ku soo laaban doonaa kooxdiisa Ciyaaraha ay Real Madrid ku waajihi doonto Villarreal ama Athletic Bilbao ee bilowga bisha March, isagoo diyaar u ahaan doona kulanka labaad ee champions League ee Schalke.
Dhinaca kale, difaacyahanka Pepe ayaa ku soo laabtay tababarka kooxdiisu samaynaysay galabnimadii khamiista, waxaanu si fiican ula dhamaystay tababarkaas.
Pepe oo ku dhaawacmay ciyaartii Altletico Madrid ee is aragga labaad ee Copa del Rey ayaa waxa uu warkiisu farxad kale u yahay taageereyaasha kooxda, laakiin waxa la filayaa in uu kulanka Sabtida ka maqnaado, isaga oo ciyaari doona kulanka Salaasada ee Champions League ee ay Real Madrid ay la ciyaari doono Schalke.
Cleveland Indians Oo 21 Ciyaarood Oo Xidhiidh Guuleysatay Iyo Rikoodhka ay Dhigtay
13/09/2017 Diiriye Ahmed
Cleveland Oo Xaqiijisay Dhaawaca Xiddigeeda Andrew Bogut
07/03/2017 Abdiwahab Ahmed
Willian, Cesc Iyo Hazard Oo Chelsea U Diray Wareegga 16-ka Tartanka Champions League